Somaliland: Heshiis Lagama Gaarin Maamulka Hawada
Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland ayaa sheegtay in aanay Hay'adda QM u qaabilsan duullimaaddada madaniga ah ee ICOA ay maamulka hawada sii hayn doonto ilaa sannadka dambe, isla markaana aan wali heshiis laga gaadhin cidda lagu wareejinayo maamulka.
Wasiirka wasaaradda duulista iyo Hawada Somaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa VOA u sheegay in arrinta maamulka hawadu yahay mid u yaalla wadahadalladii hakaday ee u dhaxeeyay dawlada Soomaaliya iyo Somaliland.
Weriyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wasiirka waraystay. Waxaanu ugu horrayn wasiirku ka hadlayaa sida ay u arkaan in Hay'adda ICOA maamulkii hawada ay ku wareejinayso dawladda Federaalka Soomaaliya.
Wareysi: Farxaan Aadan Haybe